शुक्रबारको दिनमा यस्ता काम गर्दा भाग्य चम्किने, जोतिषिय भनाई ! - Sabal Post
शुक्रबारको दिनमा यस्ता काम गर्दा भाग्य चम्किने, जोतिषिय भनाई !
१६ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ० बिचार / प्रतिक्रिया
साताको अन्तिम दिन अर्थाथ शुक्रबारलाई काम सुरु गर्दा राम्रो बारका रुपमा हेरिन्छ । धर्मशास्त्र अनुसार शुक्र ग्रह भोग९विलास, सांसारिक सुख, प्रेम, मनोरंजन, व्यवसाय, श्रीमतीको कारक ग्रह हो । त्यसैले आफ्नो श्रीमतीलाई कष्ट दिनु, कुनैपनि प्रकारको फोहोर वस्त्र लगाउनुले शुभ अशुभ फल दिने गर्छ । शुक्रवारको दिन यी कामहरु गर्नुहोस् राम्रो मानिन्छ । शुक्रवार दिन सेतो वस्त्र लगाउनुहोस् । शुक्रवार घरमा तुलसीको वृक्ष लगाएर पुजा गरेमा पनि राम्रो मानिन्छ ।
प्रचण्डलाई ओलीको व्यंग्यात्मक जवाफ- ‘सरकार ४-५ दिनमै…
अमेरिकाको भर्जिनियामा गोली ,चल्दा ११ जनाको मृत्यु
निर्मला हत्या प्रकरण : तत्कालीन एसपी विष्टसहित…
मिल्यो ‘सक्किगोनि’ र ‘भद्रगोल’बीचको विवाद
सृष्टिका पालक महादेव